र'गतको ख'राबीलाई मेटाउ'न यसरी दैनिक प्र'योग गर्नुहोस् प्या'ज, पाउनुहुने'छ यस स'मस्याबाट छु'टकारा - HPsanchar.com
प्या’ज प्रयोगबाट र’गतमा भएको खराबी तथा विषादीबाट छुट्कारा पाउन सकिने । यो जानकारी पश्चात तपाई प्रत्येक रात मोजा भित्र प्याज राखेर सुत्न मनपराउनु हुनेछ । चाइनिज चि’कित्सा सिद्धान्त अनुसार, हाम्रो खु’ट्टा र शरिरका अन्य अंगहरुबीच बलियो संबन्ध रहेको हुन्छ । प्याज र लसुनले कि’टाणुलाई नाश अर्थात मार्नेकाम गर्छ र श’रिरलाई स्वस्थ पार्ने काम गर्छ । जब प्याज र लशुनलाई एक ठाउँमा मिसाइन्छ, यसले एक प्रकारको भरपर्दो र कुशल एजेन्ट पैदा गर्छ जसले वि’षाक्तलाई मार्ने काम गर्छ । तर आज हामी प्या’जको प्रयोगबाट र’गत सफा पार्ने र तल पा’इताला देखि माथी टाउको सम्मको नसालाई सफा राखेर स्वस्थ जिवन जिउन सकिने उपचारका बारेमा बताउँदै छौं ।
आजभोली धेरै मासिहरु चाइनिज औ’षधीमा विश्वास गर्छन् किनकि यी चा’इनिज औषधीहरु भरपर्दा र हाम्रो संवेदना अर्थात (nervous system) सँग जोडिएको हुन्छ । हाम्रो खुट्टामा करिव ७००० (सात हजार) तन्त्रिकाहरु (neural endings) रहेका हुन्छन् र ती सबैको सिधा संपर्क आन्तरिक अँगहरुसँग रहेको हुन्छ । यी तन्तुहरुलाई हामीले सँधै बेवास्ता गरिरहेका हुन्छौं किनकि हाम्रा खुट्टाहरु दिनै भर जुत्ता भित्र हुने गर्छ जसले हाम्रो संवेदना (nervous) लाई सिधै असर पार्छ । खाली खुट्टाले बालुवामा हिड्ने गर्नाले अत्यन्तै फाइदा मिल्छ । प्याजले यस्ता खुट्टामा आइपर्ने अपठ्याराहरुलाई सहज पार्ने काम गर्छ । हामाीले जानकारी गराउन लागेको प्याजको उपयोग डायट वा सौना ट्रिटमन्ट भन्ने होइन । एउटा प्याजलाई ताछ्नु होस् र यसलाई डल्लो चिरा पारेर काट्नु होस् । अव प्याजको बाक्लो चिरालाई पैताला मुनि राख्नु होस् र कटनको मोजा लगाउनु होस् । यसले श’रिरमा उपयुक्त सफाईको काम गर्छ । तर यस्तो अवस्थामा बाहिर घुम्न जानु चांही हुँदैन । सकेसम्म यो उपचार पद्धति रातभर अपनाउदा अझै लाभ दायक हुन्छ ।
प्याजले छाला सफा गर्छ र जिवाणुहरु तथा बा’कटेरियालाई मारि दिन्छ । फासफोरिक एसिडले तपाईको र’गतमा एक प्रकारको चमत्कार ल्याउँछ । एसिडले तपाईको अंगहरु र र’गतलाई सफा परिदिन्छ र जिावणु तथा बा’कटेरियालाई सखाप पारेर खुट्टामा सँचो पैदा गर्छ । जैबिक प्याजको प्रयोग गर्नु होस् । विशेषज्ञहरुका अुनसार प्याजको गन्धले हावा पनि सफा राख्छ । प्याजको गन्धलाई राम्रो मानिदैन तर अंग्रेजहरु आफ्नो घर वरिपरिको हावा स्वस्थ राख्न प्याज प्रयोग गर्छन । प्याजको गन्धले जिवाणुलाई मारिदिने र हावालाई स्वच्छ राख्ने काम गर्नुका साथै संक्रमण फैलिन दिदैन । फाइदाहरु: १. रगतमा भएको बिकार तत्व तथा विषादीलाई नाश पार्छ र र’गत सफा पारिदिन्छ । २. हावा स्वच्छ पार्छ । ३.जिवाणु, बाकटेरिया लगायतका किटाणुलाई मारिदिन्छ । ४.खुट्टा फुटेको निको पार्छ । ५. र’गत खरावीका कारण हुने सबै प्रकारका रो’गमा लाभदायक छ ।
कि’न म’हिलामा नै बढी देखिन्छ था’इराइडको स’मस्या ? क’स्तो छ त कार’ण ! था’इराइड कस्तो रो’ग हो ? हाम्रो श’रीरको था’इराइड ग्लान्ड (घाँटीको अघिल्लो भागमा हुने पु’तली आकारको ग्रन्थी जसलाई था’इराइड ग्रन्थी भनिन्छ) ले थाइरोक्सिन हर्मोन उत्पादन गर्छ । थाइरोक्सि’न हर्मोनले श’रीरको सम्पूर्ण भागका खानालाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने काम गर्छ । यो हर्मोनले सामान्य रूपमा काम गरिरहेको अवस्था स्वस्थ अवस्था हो । यो अंगले बढी काम गर्ने या कम काम गर्ने भएमा हर्मोन उत्पादन घटबढी हुन्छ । यसले बढी या कम काम गर्नु नै था’इराइड हुनु हो ।
था’इराइड कति प्रकारका हुन्छन् ? थाइराइड दुई प्रकारका हुन्छन् । एउटा, हाइफोथाइरोडिज्म (थाइरोक्सिन हर्मोन कम उत्पादन गर्ने) । अर्को, हाइपरथाइरोडिज्म ( थाइरोक्सिन हर्मोन बढी उत्पादन हुने अवस्था)। हा’इपोथाइरोडिज्म कसरी हुन्छ ? थाइराइड ग्रन्थीमा रो’ग लागेमा ग्या’स्ट्राइटिसजस्तै थाइरोडाइटिस हुन्छ । जस्तो कि ग्रन्थीमा भाइरस वा किटाणुको संक्रमण भयो भने रो’ग उत्पन्न हुन्छ र हर्मोन उत्पादन गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थालाई थाइरोडाइटिस भनिन्छ । अर्को शब्दमा हाइपोथाइरोडिज्म पनि भनिन्छ । कतिपय अवस्थामा ग्रन्थीले आफै हर्मोन उत्पादन गर्न सक्दैन । यसलाई अटोइम्युनको कारणले हुने हाइपोथाइरोडिज्म हो । हामी कहाँ यही अटोयुमिनको कारणले हुने हाइपोथाइरोडिज्म धेरैलाई छ । धेरैले थाइराइड भयो भनेको पनि यही हो ।
अर्को कुरा, मोटोपना भयो भने शरीरको मागअनुसार हर्मोन पूरा हुन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा पनि हाइपोथाइरडिज्म हुन्छ । त्यसैगरी ग’र्भावस्थामा पनि यो थाइराइड हुन्छ । गर्भको बच्चाले पनि यो हर्मोन खपत गर्ने हुनाले बढी था’इरोक्सिन हर्मोनको आवश्यकता पर्छ । यस कारण गर्भवती महिलामा थाइराइडको समस्या देखिन्छ । यी दुवै थाइराइड अस्थायी प्रकृतिका हुन् । जुन बच्चा जन्मेपछि र मोटोपना घटेपछि आफै हराउँछ । अटोयुमिन तथा थाइराइड ग्रन्थीको संक्रमणले भएका थाइराइड भने स्थायी रूपमा रहन्छन् र यी था’इराइडमा जीवनभर हर्मोनको औषधी लिइरहनु पर्छ । यो थाइराइड भएको मान्छेका हरेक गतिविधि ढिला हुन थाल्छन् । कुनै पनि काममा केन्द्रित हुन नसक्ने, कब्जियत हुने, कमजोरी अनुभव हुने, म’हिनावारीमा र’क्तश्राव बढी हुने, छाला सुक्खा हुने, चिलाउने, कपाल झर्ने, शरीर फुलेर आउनेजस्ता लक्षण देखिन्छन् ।
एउटा ठूलो प्राकृतिक प्रक्रिया महिनावारी, महिलामा मात्र छ । त्यसमा केही समस्या आउन बित्तिकै थाइराइड हर्मोनको गडबडी छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । महिनावारी गडबडी हुनेबित्तिकै थाइराइड हर्मोन परीक्षण गर्ने चलन पनि त्यसैले भएको हो । थाइराइड भएकाले कुन कुन खाना हुँदैन ? केही खाना खाँदा टिएचस् बढ्ने भएकाले थाइराइड सुन्निएपछि थाइराइड हर्मोन तलमाथि जे पनि हुन सक्छ । यस कारण बन्दा, समुद्री खानाहरू खानु हुँदैन भनेर भनिएको हो । तर यी खाना पनि पकाएर खाएपछि ती खानामा हुने तत्वमा हास आउँछ । यसको अर्थ, आयोडिनको प्रभाव भएका खानेकुराहरू खानु हुँदैन भन्ने मान्यता पनि हो । मुख्य कुरा, कसरी थाइराइड नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने कुरा नै प्रमुख हो ।
थाइराइडबाट कसरी बच्ने ? कुनै पनि प्रकारको था’इराइडको लक्षण देखिएमा समयमै परीक्षण गर्ने, मोटोपना कम गर्ने, योग तथा व्यायाम गर्ने गर्दा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुर्याउँछन् । थाइराइड, हामीले चाहेर हुनबाटै रोक्न भने सकिँदैन । बरु समयमै पहिचान गरेर उचित उपचार गर्न सकेमा समस्या बढ्न पाउँदैन । मु’टु र मानसिक रो’गसम्बन्धी औषधी खाइरहेकाहरूमा मानसिक रो’ग हुन सक्छ । यस्ता बिरामीले बेला–बेला थाइराइड परीक्षण गर्नु पर्छ । गर्भवती महिलाले पनि गर्भावस्थामा भएको था’इराइड छ भने पनि चिकित्सकको सल्लाहअनुसार नियमित रूपमा थाइराइडको औषधि खानुपर्छ ।